Petro Nhoma a Edi Kan 1:1-25
Wɔawo wɔn foforo kɔ anidaso a nkwa wom mu (3-12)
Monyɛ kronkron sɛ mma a wɔyɛ osetie (13-25)
1 Me, Petro a meyɛ Yesu Kristo somafo,+ merekyerɛw krataa yi abrɛ mo a moabɔ ahwete Ponto, Galatia, Kapadokia,+ Asia, ne Bitinia; mo a moyɛ amamfrafo a wɔapaw mo. 2 Mo na Agya Nyankopɔn apaw mo sɛnea ɔbɔɔ ne tirim no.+ Ɔde honhom no atew mo ho+ sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛyɛ osetie na wɔde Yesu Kristo mogya apete mo so:+ Adom ne asomdwoe nnɔɔso mma mo. 3 Ayeyi nka yɛn Awurade Yesu Kristo Agya ne ne Nyankopɔn, efisɛ ne mmɔborɔhunu nti onyan Yesu Kristo fii awufo mu,+ na ɔnam so awo yɛn foforo+ kɔ anidaso a nkwa wom+ mu, 4 na ama yɛanya agyapade a ɛmporɔw na efĩ nni ho na ɛnsɛe.+ Wɔakora so wɔ ɔsoro ama mo;+ 5 mo gyidi nti, Onyankopɔn nam ne tumi so hwɛ mo so kɔ nkwagye mu; saa nkwagye no na wɔrebeyi no adi wɔ awiei mmere no mu. 6 Eyi nti na mudi ahurusi kɛse, ɛwom sɛ sɔhwɛ ahorow betumi ama mo werɛ ahow kakra de, nanso saa na ɛsɛ sɛ ɛba,+ 7 sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ wɔda Yesu Kristo adi a,+ mo gyidi a wɔasɔ ahwɛ+ no de ayeyi ne anuonyam ne nidi bɛba; saa gyidi no som bo sen sika kɔkɔɔ a sɛ wɔde fa ogya mu yiyi mu fĩ* mpo a, etumi sɛe no. 8 Ɛwom, munhuu no da, nanso modɔ no. Seesei munhu no, nanso mugye no di, na mode anigye kɛse redi ahurusi paa, 9 na mo gyidi nti, mo nsa bɛka mo nkwagye*+ no. 10 Saa nkwagye yi, adiyifo a wɔhyɛɛ adom a mubenya ho nkɔm no bɔɔ mmɔden pɛɛpɛɛ mu, na wɔhwehwɛɛ mu kɔɔ akyiri.+ 11 Ná honhom a ɛwɔ wɔn mu no adi adanse sɛ Kristo behu amane+ na akyiri yi wɔahyɛ no anuonyam. Enti wɔkɔɔ so hwehwɛɛ mu hwɛɛ nea ɛbɛto Kristo ne bere a nsɛm no besisi.+ 12 Woyii no adi kyerɛɛ wɔn sɛ ɔsom adwuma a wɔyɛe no, wɔanyɛ amma wɔn ho, na mmom mo na wɔde nneɛma a wɔaka ho asɛm akyerɛ mo seesei yi som mo; ɛno ne asɛmpa a ebinom nyaa honhom kronkron fii soro+ de ka kyerɛɛ mo no. Saa nneɛma yi na abɔfo pɛ sɛ wohu mu yiye. 13 Enti munsiesie mo adwene mma adwuma kɛse,+ momma mo ani nna hɔ paa;+ momfa mo ani nto adom a sɛ wɔda Yesu Kristo adi a mo nsa bɛka no so. 14 Monyɛ sɛ mma a wɔyɛ osetie, na akɔnnɔ a na mowɔ bere a munnim hwee no, munnyae akyi di,* 15 na mmom monyɛ kronkron mo nneyɛe nyinaa mu+ sɛnea Ɔkronkronni a ɔfrɛɛ mo no te no, 16 na wɔakyerɛw sɛ: “Monyɛ kronkron, efisɛ meyɛ kronkron.”+ 17 Sɛ musu frɛ Agya a obu atɛn sɛnea obiara adwuma te na ɔnhwɛ nnipa anim+ no a, momfa nyamesuro+ mmɔ mo bra, seesei a mote wiase sɛ ahɔho yi. 18 Na munim sɛ mo abrabɔ hunu a mo agyanom de gyaw mo* no, ɛnyɛ nneɛma a ɛsɛe te sɛ dwetɛ anaa sika kɔkɔɔ na wɔde gyee mo fii mu.+ 19 Mmom ɛnam Kristo+ mogya a ɛsom bo+ no so; ɛte sɛ oguan ba a dɛm ne nkekae biara nni ne ho+ mogya. 20 Ɛwom sɛ na wɔapaw no dedaw ansa na wɔrehyɛ wiase ase*+ de, nanso mo nti wɔdaa no adi awiei bere mu.+ 21 Monam no so abegye Onyankopɔn adi;+ ɔno na onyan no fii awufo mu+ hyɛɛ no anuonyam+ na ama moanya gyidi ne anidaso wɔ Onyankopɔn mu. 22 Afei a moayɛ aso ama nokware no de adwira mo* ho ama moanya onuadɔ a nyaatwom nnim+ yi, mumfi komam nnodɔ mo ho denneennen.+ 23 Na wɔawo mo foforo,+ nanso ɛnyɛ aba* a ɛporɔw mu, na mmom nea ɛmporɔw+ mu, na ɛnam Onyankopɔn teasefo a ɔte hɔ daa no asɛm so.+ 24 Na “ɔhonam* nyinaa te sɛ sare, na wɔn anuonyam nyinaa te sɛ wuram nhwiren; sare hyew na nhwiren porow gu, 25 na Yehowa* anom asɛm de, ɛwɔ hɔ daa.”+ Na asɛmpa a wɔaka akyerɛ mo no ne “asɛm” no.+
^ Anaa “pa mu.”
^ Anaa “mo kra nkwagye.”
^ Anaa “munnsuasua bio.”
^ Anaa “munya fii atetesɛm mu.”
^ Anaa “adwira mo kra.”